Waa kuma aqoonyahan? W/Q: Bashiir Raacdeeye
Sunday June, 24 2018 - 09:44:38
Saturday February 20, 2016 - 08:17:45 in by salman abdi
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii laga baahiyay idaacadda BBC-da laanteeda afka soomaaliga barnaamij magaciisu ahaa " waa kuma aqoon yahan?" oo uu isoo diyaariyay
wariye ka shaqeeya idaacadda oo lagu magaacabo c/raxmaan bidhaan.barnaamijka waxa ka qaybqaatay aqoonyahano soomali ah oo ku kala nool magaalooyinka nairobi,muqdisho iyo hargaysa,waxa ugu weyn ee lagaga hadlayay waxa uu ahaa;waa kuma aqoonyahan ama yaa noqonkara aqoonyahan?.
Haddaba,aniga oo dhex mushaaxaya kobta xogta iyo macluumaadka lagu kaydiyo (internet) ayaan si kedis ah ula kulmay maqaal uu qoray nin lagu magacaabo ProfAndreas Tolk maqaalkaas oo ciwaankiisu ahaa;waa maxay astaamaha aqoonyahanku?
Ka dib markan akhriyay maqaalka prof tolk sidoo kale aan dhigaystay barnaamijkii BBC-da laanteeda afka soomaliga ayaan jeclaystay inaan si ballaadhan wax uga qoro isla mawduuca "waa kuma aqoonyahan?” maadaama wakhtiyadan ay soo bateen dad badan oo sheeganaya "aqoonyahan”iyo qaar isku magacaabay intaba,waxa kale oo beryahan dambe soo batay erayo aan ka fogayn erayga ‘aqoonyahan’ oo dadka marar lagu magacaabo,eraydaas waxa ka mid ah;wax-garad iyo idheer-garad,haddaba,waxaan is waydiiyay;yaa aqoonyahan ah yaa se wax-garad ah yaa se indheer-garad ah?Waydiimaha kor ku xusan ayaan fikir ahaan iyo baadhitaan ahaan ku soo bandhigayaa qormaddaan .
Aqoonyahan;waxa lagu magacaabi kara qofkasta oo si faah-faahsan uu bartay mid ama wax ka badan culuumta jaamacadaha lagu bixiyo kuna bartay goobaha culuumta lagu barto (academic institution) sida jaamacad.haddii qofku bartay cilimiga sayniska,dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo culuumta xoolaha kana bartay jaamacad;waa aqoonyahan qofkaasi.haddaba,anigoo ka shidaal qaadanaya qeexitaanka erayga aqoonyahan,somaalidu wakhtigan si balladhaan ayaa lo adeegsada,cidkastana ama waa lagu magacaaba ama isaga/iyada ayaa isku magacaaba,taas darteed,qofkasta oo ka hor imanaya ama ka baxsan qeexitaanka erayga ‘aqoonyahan’ ama ha sheegto ama ha lagu sheego ma noqon karo aqoonyahan,laakin waxa jira wax kale oo lagu magaaci karo xagga danbe ayaan se kaga faalloon,waxa kale oo aqoonyahan lagu magacaabi kara dadka waayo-aragga ah,tusaale ahaan makaanigga ku wadh-wadhay furfuridda iyo kala dhigdhigga baabuurta; waa aqoonyahan ,waxa kalo aqoonyahan lagu magacaabi kara dadka abwaannada ah sida salaan carrabay iyo dadka la midka ah waxay lahaayeen aqoon taas oo ku heleen waayo aragnimo maadaama ay nooleeyeen muddo dheer iyo dhul badan oo ay mareen.
waxa jira dad lagu magacaabo ama loogu yeedho erayga’aqoonyahan’ sida aqoonyahan jaamac cali xuseen oo kale ,runti ahaanti waa aqoonyahan marka aad akhrido taakhriikhdiisa waxbarsho iyo heerka ay gaadhsiisan tahay,waxa jira aqoonyahano badan oo soomali ah sida,prof axmed ismaaciil samar iyo qaar kalo badan oo la yaqaan ama aan la qooninba.
Haddaba,qofkasta oo caani ahi ma noqon karaa oo aqoonyahan? Farqiweyn ayaa u dhexeeya caannimada iyo aqoonta,taas darteed qofkasta oo caani ahi ma noqon karo aqoonyahan,laakin qofkasta oo caani waa noqon kara aqoonyahan.
Sidaan kor ku soo xusay,waxa jira erayo aan ka fogayn erayga’aqoonyahan’macno ahaan oo warbaahinta soomalidu aad u adeegsato beryahan danbe,erayadaas waxa ka mid ah; wax-garad iyo indheer garad,haddaba , waa kuma aqoonyahan?,waa kuma wax-garad? Waa kuma se indheer garad?.
Erayga ‘indheer-garad’ kama foga erayga ‘aqoonyahan’ laakiin haddana farqi ayaa jira darajada aqoon ahaan marka lage eego.
Indheer-garad;waxa noqon kara qofkasta oo wax-garad ah,aqoonyahan oo ku takhasusay cilmi ka mid ah culuumta si xeel-dheer ,waxa uu la mid yahay erayga ingiriisiga ah ee (specialist),tusaale ahaan qof dhakhtar ah oo haddana ku takhasusay cilmiga wadanaha oo keliya( cardiology) qofkaas oo kale ayaa noqonkara indheer garad,waxaanu indheer ama in badan ka bartay cilmiga waddanaha iyo xanuunada ku dhaca ,taas darteed,wuu uga xogogaal san yahay dhakhtarka kale ee cudurad guud isagu yaqaan,si kastaba hanoqote e, qofkasta laguma magacaabi karo " indheer-garad” waayo qofkasta ma’aha indheer garad.
Wax-garad;waxa noqon kara qofkasta oo qaangaadh ah marka meesha waxa ka baxay;caruurtii iyo dadka dhimirka ahwaayo caruurtu ma’aha qaangaadh qofka dhimirka ahina maskax ahaan ayuu xanuunsanaya,taas darteed,qofkasta oo wax-garad ahi ma noqon karo aqoon yahan,laakiin aqoonyahanku waa wax-garad,waana u gudbikaraa indheer-garad ,indheer arag ama indheer barad.
Halkan ka Dhegayso Barnamijki BBCda http://www.bbc.com/somali/aqoon_guud/2016/02/160216_aqoonyahan
w/q ;bashiir raacdeeye
20/06/2018 - 19:07:59
Hargeisa:-Xukumada Somaliland Oo Ka Hadashay Dedaalada Beesha Caalamka Ee Daminta Colaada Tuka-raq Iyo Qodobada Ay Soo Bandhigeen.